प्रचण्डमाथि निशानाः छुद्रताको पनि सीमा हुन्छ नि साथी ? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रचण्डमाथि निशानाः छुद्रताको पनि सीमा हुन्छ नि साथी ?
यो तुच्छ संस्कृतिको निशानामा अहिले प्रचण्ड छन् । भोली यही संस्कृति विकास भयो भने यसको निशानामा ओली, देउबादेखि जो पनि पर्न सक्छन् ।
यो पूर्वाग्रहले प्रचण्डले जे गरेपनि आलोचना गर्छ । प्रचण्डका हरेक कामको निषेध गर्छ । यो पूर्वाग्रह र आलोचनाको छूद्र संस्कृतिले प्रचण्डको अस्तित्व स्वीकार्न चाहन्न ।
याे पनि पढ्नुस इतिहासमैं पहिलोपटक भारत जाने कामदारका लागि अनिवार्य बीमा
राजधानी लोडसेडिङमुक्त हुनु र नयाँ वर्षदेखि नेपाल नै लोडसेडिङमुक्त हुनु सामान्य कुरा थियो र ? के हामीले यो सोचेका थियौं र नेपालमा यस्तो पनि होला भनेर ? आलोचना त बरु जनताको आर्थिक क्षमता कमजोर भएकोले बिजुलीमा गरीबलाई सब्सिडी देउ, गरीबले कम यूनिट मूल्य तिर्नुपर्ने गर भन्नुपर्ने होइन र ?
यो तुच्छ संस्कृतिको निशानामा अहिले प्रचण्ड छन् भोली यही संस्कृति विकास भयो भने यसको निशानामा केपी ओली, देउबादेखि जो पनि पर्न सक्छन् ।